Iqembu leSri Lanka Linqoba eleZimbabwe Kumdlalo weKhilikiti
Iqembu elimela ilizwe le Zimbabwe linqotshwe ngama wickets amane ngele Sri Lanka emdlalweni we Test ofike emaphethelweni namhla khonale kwele Sri Lanka.
Iqembu le Sri Lanka liphindisele ukunqotshwa nge 3 ka 2 elikwenziwe ngele Zimbabwe kumidlalo eyohlobo lwe One Day International elandelwe yilo owodwa ofike emaphethelweni lamhlanje.
Kuhlandla lakuqala elomdlalo iqembu le Zimbabwe litshaye ama runs angu
356 kwathi kwelesibili litshaye ama runs angu 377 kwathi ele Sri Lanka kuhlandla lakuqala lithole ama runs angu 346 kwathi kwelesibili litshyaye ama runs angu 391 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha.
Ukaputeni weqembu le Zimbabwe uGraeme Cremer utshele inhlanganiso kamabonakude eye Supersport ukuba bayaziqhenya ngendlela abadlale ngayo loba benqotshiwe.
“Khona kuyadanisa yebo kodwa kumele sitshayele ihlombe iqembu leSri Lanka ngokwenelisa ukufikisa ama runs edlula 380. Lathi sizithole sisesimeni esingekho lula kodwa senelise ukuthi sidlale kuze kufike usuku lokucina olomdlalo njalo kumele siziqhenye ngalokho.”
Ukunqotshwa kweqembu le cricket kulandela ukunqotshwa kwamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye lasemdlalweni we rugby ngempelaviki edluleyo.
Iqembu lenguqu linqotshwe nge 1 ka nya kuhlandla lakuqala elomdlalo wokudinga amaqembu azakuyadlala kumncintiswano we Chan ngomnyaka ozayo kodwa iqembu le Zimbabwe lilethuba lokuguqula lesisimo njengoba ihlandla lesibili elomdlalo lizadlalwa ngempelaviki ezayo esigodlweni iHarare.
Iqembu le rugby lona linqotshwe emdlalweni we Africa Cup yona eqhubekela phambili kulimpelaviki lapho iqembu le Zimbabwe Sables elizadlala khona lele Kenya enkundleni ye Hartsfield ngoMgqibelo.
UTheo Weale, olilunga lequla eliqhuba amalungiselelo alumdlalo ukhuthaze uzulu ukuba abuye azosekela iqembu lesizwe bengalahli imbeleko ngoba leliqembu ladliwa ngele Namibia.
“Vele njengoba kwezemidlalo kumele kube lonqobayo lonqotshwayo kwaba liphutha ukuba iqembu lethu linganqobi loba nje kwaba lezinqumo ezisolisayo kulowomdlalo kodwa akusizi ukwala silokhu sikhuluma ngakho.
“Engingakutsho yikuba abantu bonke kababuye bezosekela iqembu lesizwe sigcwale phamu enkundleni yeHartsfield.”
Ngokwakuqala kusukela ngomnyaka ka 2011 ukuba iqembu lesizwe lidlalele enkundleni ye Hartsfield njalo inhlanganiso ye Zimbabwe Rugby Union izaqhuba inhlelo ezokukhuthaza abalandeli bomdlalo ukuba babuye ngobunengi babo kusukela ngoLwesine ntambama.